SIDA LOO KORO YAANYO WADNAHA BULL EE UU BEERTA - NOOCYO YAANYO
Bannaanka u badan oo yaanyo ku beeri, waxay xiiseynayaan sidii ay u kobcin lahaayeen yaanyo "Bull Heart" ee bannaanka u furan.
Waxaan si wadajir ah uga fiirsan doonaa waxyaabaha gaarka ah ee kordhaya noocyada kala duwan ee xiisaha leh.
Ma taqaanaa? Bartamaha qarnigii XVI, tamaandhada wuxuu u yimid Europe. Muddo dheer, yaanyada ayaa loo arkaa mid aan la dabooli karin oo xitaa sun ah. Bannaanka Yurub yaryar iyaga oo dhirta sida quruxda qurxinta.
Faa'iidooyinka iyo sifooyinka noocyada kala duwan
Kala duwan ayaa leh sifooyinkiisa iyo xooggiisa, kaas oo aad ka akhrisan karto hoosta.
Kala sooc dadka beerta jecel dhawr sababood:
Miro waaweyn oo gaaraya tiro ah 150-200 g (noocyo kala duwan oo kala duwan oo leh yaanyo madow waa heysta rikoodhka, miraha ay gaareen tiro ballaaran oo ah 500-600 g).
Wax soosaarka sare ee yaanyada. Waxaad heli doontaa ugu yaraan 4 kg oo miro ah baadiyaha (oo lagu koriyo, 10-12 kg oo yaanyo ah ayaa laga goostay hal warshad).
Ku dhidid dhadhanka. Muuqaal ah noocyada kala duwan ayaa ah joogitaanka qadar yar oo dareere ah miro, maxaa yeelay waxa ay u muuqdaan inay aad u macaan yihiin dhadhanka.
Burooyinka Tallaalka. Heerka baadiyaha waxay gaari kartaa koritaanka bini'aadamka (160-170 cm).
Joogitaanka hoosaadyo kala duwan oo leh midabyo kala duwan. Waxaan soo saarnay dhowr waxyaalood oo ka mid ah "Bull Heart", midhaha ay leeyihiin jaale ah, casaan, caddaan iyo midab madow.
Sidaa darteed, yaanyo "smoothie" waa noocyo kala duwan oo leh dherer dheer, dhererkiisu sarreeyo, midabyo dhadhan badan leh oo midabyo kala duwan leh waxayna bixisaa goosashada fiican xitaa dhulka banaan.
Waa muhiim! Itaaladaan kala duwan, miraha ugu weyn waxay u bislaadaan burushyada hoose ee baadiyaha, oo u dhow dhulka. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay si loo hubiyo in yaanyada aadan taaban dhulka, si looga fogaado lakab.
Geedo goos goos ah oo si habboon loo beeray - fure u ah goosashada wanaagsan. Sidaa darteed, waxaan ku tilmaameynaa qodobbada muhiimka ah ee loo baahan yahay in la tixgeliyo marka la beeri doono yaanyada yaryar ee dhulka banaan.
Waxaan ku talinaynaa si taxadar leh dooran geedo, sida quruxsan, jaleecada hore, dhirta dhalinyaradu ugu dambeyntii waxay siin kartaa goosashada wax yar. Tani waxay sabab u tahay qadarka weyn ee kiimikada, taas oo seedling "quudin" milkiilaha.
Shuruudaha geedo beerto ee dhul furan
Si geedo aan la qaboojiyey, waxaad u baahan tahay si aad u ogaato sida saxda ah marka la beerayo yaanyo "Bull's heart."
Geedo waxay bilaabaan inay ku beeri dabayaaqadii May - horraantii Juun. Markii hore (maalinta ka horeysa soo degitaanka) waxay u baahan tahay in lagu daaweeyo Fitosporin-M. Waxbarashadu waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo xaaladaha cimilada dhabta ah.
Haddii ay tahay roob qabow ama mid culus, waxaa fiican in la sugo wax yar oo la soo dego. Goobidda isla markiiba ka dib roobka aan lagu talin, sida xididdada dhirta laga yaabaa in qudhmi.
Ma taqaanaa? Qodobka ugu horreeya ee suugada yaanyo ah ayaa lagu daabacay buug cunto karis ah oo ku yaala Naples 1692, waxaana qoraagu tilmaamayaa xaqiiqda ah in qariidadani asal ahaan kasoo jeeda Spain.
Bacriminta ciidda ka hor inta aan la beeri
Isla markiiba, waxaan ognahay in Bull Heart Tomato jecel yahay carrada leh falcelin dhexdhexaad ah ama waxoogaa acidic ah (heerka 6.0 - 6.5 pH).
Tan iyo markii yaanyada waxay jecel yihiin inay koraan on substrate ah oo hodan ku ah arrinta organic, bacriminta waa waa. Ka hor inta aanad ku dhicin 1 dabaq. m. samee 8-10 kg oo ah humus ama compost iyo 10 g oo ah Bacriminta nitrogen. Intii lagu guda jiri lahaa, ½ ​​tsp waxaa la geliyaa ceel kasta. Bacriminta "Urgas".
Haddii aad dalbato bacriminta meeshan xilliga dayrta, qadarka kaalmada horay u sii-kabashada ah ayaa laga yaabaa inay ka yar tahay tan la sharraxay.
Tan iyo noocyada kala duwan ee jirka ah sare iyo sare sare-dhulka, waxay u qalantaa raacaya nidaam beerto qaar ka mid ah si ay duurka u ma qarin midba midka kale.
Ku beeray 4 dhirta 1 dabaq ah. m., adoo raacaya qorshaha 40x50 cm. Iyadoo nidaamkan, waxaad ka badbaadin doontaa duurka ka jiran cuduro badan oo muuqda inta lagu jiro beeritaanka xad dhaafka ah.
Marka dhulka la furo, duurka ayaa lagu aasay caleemaha cotyledon, oo ku aasnaa 1/3 ee dhererkeeda.
Tan waxaa loo sameeyaa si ay xididdada dheeraadka ah uga muuqdaan asliga ah iyo dhirta si dhaqso ah u koraan.
Beerto waxaa loo sameeyaa si uu dhirta u kobco xagasha koonfureed.
Ka dib markaad sameysey habka saxda ah, waxaa habboon in aad daryeesho waraabinta iyo aereynta ciidda. Sidoo kale waqti si ay u dhisaan taageero for duurka yaanyo.
Maxay tahay inaad waraabiso
Cab cabitaan badan oo tamaandho ah inta lagu jiro sameynta uurjiifka. Isla mar ahaantaana waxaad u baahan tahay biyo si ay qoyaanku ugu dhicin caleemaha. Laga soo bilaabo tan waxay u saameeyeen cudurada fangas (qoyaan xad dhaaf ah ee hawada ayaa sidoo kale keenta cudurka). Wixii waraabiyo waraabinta biyo diirran oo keliya ayaa loo isticmaalaa!
Qodobbada soo socda waa in si taxadar leh loo aqriyaa, haddii kale waxaad dhali kartaa dhirta, labadaba bilowga iyo inta lagu jiro xilliga Bisaylkiisa ee midhaha.
Haddii aad ku shub geedo yaanyo, waxay bilaabi doontaa in ay fidiyaan iyo deformaan. Xaaladdan oo kale, jirriddu ma heli doonto wakhti ay ku adkaato, iyo dhirta ayaa laga yaabaa inay jebiso miisaankooda.
Waa muhiim! Iyadoo qoyaan xad dhaaf ah iyo kulayl la'aan, caleemaha bilaabaan si ay u koraan si xoog leh in ay waxyeello of fruiting.
Xumada ama xad-dhaafka qoyaanka waxaa lagu go'aamiyaa midabka caleemaha yaanyo: caleemo qoyan oo cagaaran - la'aanta qoyaan; caleemaha waxay ku baxaan cagaar cirro leh - xad dhaafka qoyaanka.
Sidaa daraadeed, waraabinta aan habooneyn ayaa diidi karta dhammaan quudinta iyo qabowga geedka.
Neefsashada iyo dharka sare
Bannaanka u badan ayaa xiiso leh waxa aad u baahan tahay si aad u quudiso yaanyo "Bull Heart" iyo sida loo soo qaato mulch si aad u hesho goosashada ugu fiican.
Tomato "Bull Heart" xilli ciyaareedka ayaa la quudin jiray 2 jeer. Subkortex ee ugu horeeya waxaa la fuliyaa 19-20 maalmood ka dib markii laga beerto geedo. The labaad - 19-20 maalmood ka dib markii ugu horeysay, inta lagu jiro muddada abuurka miro.
In foomka bacriminta ku samee cunto dareere ah. Si tan loo sameeyo, 10 litir oo biyo ah waxay qaadan 15 g oo bacriminta potash, 25 g oo nitrogen ah iyo 40 g oo ah fosfate. Isticmaalka bacriminta koowaad waa sida soo socota: 10 litir 15 bushog. Iyada oo quudinta labaad - 10 litir ee 7 duurka.
Si looga hortago horumarinta kalluunka vertex, dhirta waxaa lagu buufin karaa xal nacdo ah toddobaadkii hal mar. Daadinta waxaa lagu fuliyaa muddada koritaanka miro.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Bacriminta qalalan ee loo isticmaalo xakameynta (5 g of nitrogen iyo 10 g of phosphate 1 sq. M.).
Waa muhiim! Bacriminta nitrogen ee xad-dhaafka ah waxay horseedi karaan cudur dhir iyo hoos u dhac ugxan.
Ka feker sida la'aanta bacriminta saameyn ku yeelata midabka caleemaha. Iyadoo la'aanta potassium ka baxo curl, xuduudda qallalan waxay u muuqataa iyaga. Naaquska nitrogen - caleemaha waxay noqdaan kuwo caajis ah oo la jeexjeexo.
Haddii yaanyo ka maqan fosfooraska, markaa dhinaca dambe ee caleemaha noqda midab. Waxaa lagu cadaadiyaa jiritaanka iyo kor u kaca. Iyadoo la'aanta magnesium caleemaha ayaa lagu rinjiyeeyaa midabka marble.
Bacriminta ayaa la isticmaalay - hadda waxaad samayn kartaa mulching ciid.
Yaanyada Mulch waxay u baahan yihiin sabab qaar:
si aad u ilaaliso qoyaanka dhulka;
in laga takhaluso haramaha;
si loo ilaaliyo xididada kulaylka ama hypothermia;
Tamaandho ma la soo xiriiraan dhulka.
Sidaa darteed, mulch sameeyaan falal dhowr ah oo faa'iido leh hal mar, sidaas darteed waxay u baahan tahay in la dhigo ka yar duurka ee yaanyada.
Qeyb ka mid ah mulch, waxaad isticmaali kartaa qaddar dherer ah qalabka: madow / caddaan / filim cad, kartoon, peat, balka, caws iyo agrofibre.
Mulch dhulka isla markiiba ka dib markii laga beerto geedo, adoo istcmaalaya si aaney u taabanin asliga ah. Ka hor inta aanad u baahnayn dhulka si aad u qoyso (laakiin ma badna) loosen.
Waa muhiim! Marka ciidda la mulched leh sida balka iyo cufan ee geedaha caleemaha, Bacriminta nitrogen waa in lagu dabaqo lakabka si loo daboolo mulch, tan maaddooyinka this qaadan nitrogen ka ciidda inta lagu guda jiro decomposition.
Dhammaadka xilliga xagaaga, mulchin dabiici ah ayaa lagu beeray beertii, waxay u adeegi doontaa bacriminta dalagyada soo socda.
Dhisida habboon ee duurka
Si loo sameeyo duurka "Bull Heart" wuxuu noqon karaa 1 ama 2 caws. Si loo sameeyo 2 stems, marka lagu daro midka ugu weyn, waxay ka tagaan mid kale oo dheeraad ah - laga bilaabo stepchild koowaad.
Dhamaan caleemaha kale iyo caleemaha hoose waa in laga saaro, tan iyo caleemaha intooda badan - hooseeyaa dhalidda (intaa ka sii dheer, waxaa jiri doona miraha badan, laakiin waxay noqon doonaan kuwo yaryar).
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad xadido tirada burushyada leh miraha hal geedka ilaa 8 gogo '. Sidaas waxaad ka heli kartaa yaanyada ugu weyn iyo dhadhan fiican leh.
Qoryaha yaryar yaryar
Dhirta Garter waa qasab, sida duurka sare waxay si fudud u adkeysan karin miisaanka midhaha hoose iyo jaban (ama "jiif"), ka dib markii taas oo dhirta oo dhan ayaa si lama filaan ah u qudha.
Dhallin duurka waxay sameeyaan ka dib markii ubax, sida ugu dhakhsaha badan ay bilaabaan in ay xiraan miro. Pegs 180-190 cm ee dhererka iyo 3-4 cm qaro weyn ayaa loo isticmaalaa sidii taageero (taageeradu waxay noqon kartaa mid hooseeya, iyadoo ku xiran dhererka baadiyaha).
Warshadu waxay ku xidhan tahay taageero leh xarig. Haddii qashir-xayawaanku u dhaqmo sidii taageero, ka dibna ka taxadar in midhaha si xor ah u dhex maraan godadeeda.
"Bull's heart" waa noocyo kala duwan oo tamaandho ah oo tufaax ah, tan iyo 70-80 maalmood waxay ka gudubtaa geedo beerto si ay u goostaan. Goynta waxaa loo fuliyaa sida Bisaylkiisa ee yaanyada (sida miraha ka baxsan si dhakhso ah u noqdaan wax aan faa'iido lahayn).
Waa muhiim! Dhammaan yaanyada (xitaa qaan gaadhin) waa in la goosto illaa heerkulka habeenku hoos u dhaco 8 ° C.
Goosashada miraha waxaa lagu fuliyaa cimilada diiran, qallalan. Xaaladdan oo kale, miraha la soo ururiyay waa inay noqdaan kuwo qallalan, haddii kale wakhti yar ka dib waxay bilaabi doonaan inay isku milmaan.
Haddii aad soo xirtey yaanyada dillaacsan, waad awoodi kartaa miro miro. Si arrintan loo sameeyo, miraha cagaaran waxaa la dhigaa hal lakab qol leh heerkul ah + 10-12˚C iyo qoyaan ku dhowaad 80%.
Isla mar ahaantaana, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u hubiso oo uga saarto yaanyada qashinka ah. Qiyaasta daaweynta degdegga ah, heerkulku wuxuu u kaca 21-24 jir. Xaaladahaas oo kale, miraha waxay u bislaadaan todobaad.
Haddii Bisaylkiisa uu ku dhaco qol dhalaalaya, miraha waxay yeelan doonaan hooska iftiin leh.
Waa muhiim! Inta lagu jiro qolka koriinku waa u baahanyahay in la duubo.
Isticmaalka miraha yaanyo "Wadnaha Bull"
Tan iyo miro ayaa leh cabbir cajiib ah, waa ku dhawaad ​​aan suurtagal ahayn in ay u bilowdo ilaalinta. Sidaa darteed, salads, casiir iyo ketchups ayaa laga sameeyey. Thanks to dhadhanka macaan, casiir ka yaanyo kuwan la mid ah berry.
Tamaandho ee kala duwan this ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale caafimaad leh. "Wadnaha Bull" wuxuu ka kooban yahay potassium, iodine, fosfooraska, fitamiinada B1, B2, B6. Waxa kale oo ku jira qadar ku filan fitamiin A iyo C. Tamaandhada waxaa ku jira serotonin - hormoonka farxada. Tani waxay sababtaa, yaanyada waxay kobcisaa niyadda.
Casiir yaanyo ah ayaa lagu qoray habka cuntada nafaqada ee cudurada dheef-shiid kiimikaadka, cudurrada wadnaha, iyo sidoo kale xaaladaha xanuunka caloosha iyo mindhicirka.
Tamaandhada "Bull's heart" waxay ku habboon yihiin dadka raacaya cunto. Khudradani waa calorie-low, iyo chromium waa qayb ka mid ah waxay siinaysaa dareen ah oo uureysi.
Sidaa darteed, ma helin kaliya khudradda dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale dukaanka fiitamiinada iyo macdanta ee lagama maarmaanka u ah shaqada jirka.
Waa muhiim! Tamaandhada waa in aan lagu xadgudbin arthritis, turki, cudurada kelyaha sababtoo ah maaddada oxalic acid iyaga oo iyaga oo si xun u saameeya metabolismka biyaha-cusbo.
Tamaandhada "Quluub Bull" ayaa ku dhacay jacayl leh beeraleyda ma aha oo kaliya sababtoo ah dhalidda, laakiin sidoo kale sababta oo ah waxay yihiin kuwo aad u dhadhan fiican leh iyo caafimaad leh. Adigoo adeecaya tilmaamaha, waxaad si sahlan u kobcin kartaa daaqsiyo caafimaad leh oo wax soo saar leh, taas oo ku siin doonta miraha delicious.